Raw Methenolone Enanthate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Metenolone enanthate, kana methenolone enanthate, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) mishonga inoshandiswa kunyanya mukurapa kweanemia nekuda kwekusakatika kwemafupa. Iyo inogonawo kushandiswa kugadzirisa muviri nekushanda.
Raw Methenolone Enanthate powder (303-42-4) tsananguro
Mafuta Methenolone Enanthate powder (inozivikanwawo se primobolan depot) injectable anabolic steroid inoratidza unyoro anabolic uye pasi uyerogenic, iyo ndeyeboka re dihydrotestosterone (DHT). Iyo enanthate ester inoita mamiriro ezvinhu umo kuwedzera kwe steroid kubuda uye kunogara kwakakwirira kwemavhiki maviri. Inogona kushandiswa pakurapa kwemisumbu kuparara kwezvirwere, osteoporosis uye sarcopenia pamwe nekuwedzera kwenguva yakareba corticosteroid. Mune dzimwe nguva, inoshandawo mukurapa kwecarcinoma uye hepatitis. Metenolone enanthate yakatangwa nokuda kwekushandisa kurapwa mu1962. Iyo inogonawo kushandiswa kugadzirisa muviri nekushanda.
Kemikari Name Primobolan depotDelapromor, Methenolone enanthat
muchiso Name Primobolan Depot, Nibal Injection
Kirasi yeMishonga Androgen; Anabolic steroid; Androgen ester
Molecular Wsere 414.62
Kunyorera Point 67ºC ~ 68ºC
Biological Half-Life IM: 10.5 mazuva
ruvara White crystalline yakasimba
Skukodzera mvura inoputika
Inogadziriswa mumethanol uye chloroform
APane An injectable anabolic uye androgenic steroid.
Chii chakakosha Methenolone Enanthate powder (303-42-4)?
Methenolone Enanthate powder (inozivikanwawo se-primobolan depot) injectable anabolic steroid inoratidza unyoro anabolic uye pasi uyerogenic properties, ndeyeboka re dihydrotestosterone (DHT). Iyo enanthate ester inoita mamiriro ezvinhu umo kuwedzera kwe steroid kubuda uye kunogara kwakakwirira kwemavhiki maviri. Inogona kushandiswa pakurapa kwemisumbu kuparara kwezvirwere, osteoporosis uye sarcopenia pamwe nekuwedzera kwenguva yakareba corticosteroid. Mune dzimwe nguva, inoshandawo mukurapa kwecarcinoma uye hepatitis. Metenolone enanthate yakatangwa nokuda kwekushandisa kurapwa mu1962. Iyo inogonawo kushandiswa kugadzirisa muviri nekushanda.
Iyo Yakakura Methenolone Enanthate Pfumbi (303-42-4) mabasa
Methenolone Enanthate is steroid injectable inoshanda kuburikidza nekusimudzira inevana anabolic uye zvishoma uyerogenic properties. Inoshanda nekugadzirisa mamiriro ezvinhu apo steroid yekukohwa inowedzera uye inogara ikoko kwemavhiki maviri. Izvi zvinoita kuti zvive sarudzo yakanaka kune ani zvake anoda kuwedzera steroid yavo yepamusoro uye agare nenzira iyo kwenguva refu. Iyi inorable format ye methenolone yakakurumbira pamusana pemari inokwana uye kubudirira kune varume vanoda kuvaka miviri yavo pamutengo wakakura.
Raw Methenolone Enanthate powder (303-42-4) inobatsira
Kusimbisa simba rekudzivirira muviri
Mishonga mumisumbu kuchengetedzwa
Tenga Methenolone Enanthate powder kubva kuBuasas.com
JUCKER '' Kufambira Mberi Mukutsvakurudza Mishonga / Fortschritte der Arzneimittelforschung / Progrès ...